Viatamin AD nokuti jekiseni - China Ningbo Second Uwandu hwemakemikari
Manual nokuti vhitamini AD jekiseni [Description] chigadzirwa Uyu Hauoneki kana chiedza tsvuku dzakajeka jikichira zvokunwa. [Rinoshanda uye Use] chigadzirwa ichi chine vhitamini A uye D. ari vhitamini A anogona kushanda sechikamu mberi kukura mhuka, tiine chakaipa mashandiro epithelial zvinyama akadai ganda, conjunctiva, cornea uye zvichingodaro, uye zvinotora mugove kwetunhu zvinhu nezvishava uye runogonesa kuti sensitization kuti the retina. Uyezve, zvinoda chikamu mijenya pamusoro gasification mumuviri, kunyanya ...
Manual nokuti vhitamini AD jekiseni
chigadzirwa Uyu Hauoneki kana chiedza tsvuku dzakajeka jikichira zvokunwa.
chigadzirwa ichi rine vhitamini A uye D. ari vhitamini A anogona kushanda sechikamu mberi kukura mhuka, tiine chakaipa mashandiro epithelial zvinyama akadai ganda, conjunctiva, cornea uye zvichingodaro, uye zvinotora muupenyu kwetunhu rinoonekwa dzepepuru uye runogonesa ari sensitization kuti the retina. Uyezve, zvinoda chikamu mijenya pamusoro gasification mumuviri, kunyanya nokuti gasification ose unsaturated fattyacid. The vhitamini D ane inokosha zvainoita muviri calcium phosphorus uye pup kuti mapfupa kukura, izvozvo kazhinji mashandiro sezvo kutsigira kuipa Absorção de Água calcium phosphorus iri ura duku. The metabolic vanoshingaira zvinhu vhitamini D anogona kuchinja reabsorption calcium nokuda itsvo tubules, tiine mwero calcium iri achiparadzira ropa, uye mberi chakaipa kukura repfupa.
Zvinonzi ainyanya kushandiswa vhitamini A uye D kushaikwa, akadai usiku upofu, keratomalacia, dermatitis, kusimba, osteomalacia uye zvichingodaro.
Intramuscular jekiseni: mumwe dose chete, 5 ~ 10ml kuti bhiza uye zvipfuwo; 2-4ml nokuti dhongwana, mhuru, makwai uye renguruve; 0.5-1ml gwayana uye Piglet.
Ovhadhozi vhitamini A kunogona kukonzera toxication. The mhuka chenjera toxicity kunoratidzwa sezvo kufara, blurring nechaanoona, encephaledema, mumarutsi; kuti chirwere toxicity kunoratidzwa sezvo neanorexia, ganda lesion uye kukuvara viscera uye zvichingodaro.
Kunwisa vhitamini D zvinogona anokanganisa zvakananga muviri calcium phosphorus, kuderedza calcification remafupa, bvisai ectopic calcification iri nyoro nyama uye arrhythmia uye tsinga dysfunction nezvimwe zviratidzo.
Kunwisa vhitamini D anogonawo zvisina kunanga kunokanganisa muviri dzimwe lipid-soluble mavhitaminzi (akadai vhitamini A, E uye K)
Chete intramuscular jekiseni, asingatenderwi kuti overdosed.
250 000 inokwana zviyero kuti Vitamin A uye 250 00 inokwana zviyero kuti vhitamini D.
Zvikachenge- airtight ezvinhu panzvimbo isina kubva chiedza (pazasi 30 ℃).
Previous: Tristerone Complicis jekiseni
Next: Chorionic Gonadotrophin majekiseni (HCG)
Viatamin Ad For jekiseni
Tristerone Complicis jekiseni